Uyifaka njani i-beta ye-MacOS Monterey | Ndisuka mac
Uyifaka njani i-beta ye-MacOS Monterey
Ukusukela nge-7 kaJuni ephelileyo leyo ibonisiwe IMacOS Monterey ngentsebenziswano neApple ngeWWDC, khange siyeke ukuthetha ngeendaba eziziswa yile nkqubo intsha yokusebenza. Ndiyayiqonda ngokupheleleyo imvakalelo yokufunda kodwa andikwazi ukungcamla. Ingikhumbuza i-movie yeAl Pacino xa wathi: "Jonga kodwa ungachukumisi, chukumisa kodwa ungcamle ...". Ukuba uyafuna, siza kuchaza indlela yokufaka iMacOS Monterey Beta. Ewe ulumke kwaye ulandele kuphela amanyathelo ukuba uyazi ukuba wenzani.
Ndifuna ukubonisa ngaphambi kokuqala oko ukufaka i-betas kuhlala kuthwala umngcipheko abanye abantu banokucinga kodwa uninzi alunako. Oko kukuthi, ukuba iMac yethu iphelelwe lixesha kuba siyifakile iBeta yenkqubo yokusebenza esele isencinci, ayisiyongcamango ilungileyo kwaye nokuba incinci ukuba yenziwe kwizixhobo eziphambili. Ke kuya kufuneka uthathe uxanduva. Ndithi kuwe linda uguqulelo olusemthethweni ukuba luphume kwaye nditsho ndikuxelele ukuba xa kusenzeka, ulindele nokuba ngaphezulu kancinci. Kodwa ukuba ufuna ukuzama imisebenzi emitsha, sichaza ukuba yenziwa njani.
Ukuba ufuna ukubona yonke into entsha kwi-macOS Monterey njengoLawulo lweNdalo iphela, Yabelana ngokuDlala I-FaceTime, imowudi entsha yokuGxila, usetyenziso lweendlela ezimfutshane, iTekisi ebukhoma, iSafari entsha nokunye, Kuya kufuneka ulandele le khokelo kule leta. Kuya kufuneka uqhubeke ufunda yonke into, ungayi ngqo kwinqanaba. Linda.
Into yokuqala kwaye ndiyayiphinda, kukuba uza kufunda ukuba ungayifaka njani inguqulelo ye-beta yabaphuhlisi beMacOS Monterey. Inguqulelo yeBeta, okt kwiimvavanyo. Siyazi ukuba iApple ityhile uhlobo olukhulu lwe-macOS kwi-WWDC 21 yayo ephambili kwaye yenza ukuba umbhekisi phambili we-beta afumaneke kuvavanyo kwi-Mac okwangoku, I-beta yokuqala kawonkewonke yeMacOS 12 yaseMonterey iza kufika ngoJulayi.
Thatha loo ngcaciso. Le beta yenzelwe abaphuhlisi kuphela. Enye enye le:
LUmsebenzi wolawulo kwindalo yonke awufumaneki kuhlobo lokuqala lwe-beta kubaphuhlisi beMacOS Monterey, kodwa sijonge phambili kuyo kungekudala.
Uyifaka njani i-beta yonjiniyela weMacOS Monterey
Nceda uqaphele oko kungcono ukusebenzisa iMac yesibini ukufaka i-MacOS Monterey beta, njengemicimbi yokusebenza kunye nokuthembeka kuqhelekile. Icacile, khumbula ukuba ukuze ufake i-beta kufuneka ube neMac ehambelanayo. Ungalwazi uluhlu olupheleleyo Ukujonga oku kungenayo kwethu.
Ukuba awukabhalisi njengomphuhlisi weApple, Kuya kufuneka uyenze apha. Okuphikisanayo, ungalinda inkqubo ye-beta yoluntu simahla ukusungulwa ngoJulayi. Sihamba ngamanyathelo ayimfuneko ukuqala ukonwabela uhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza:
Kuya kufuneka wenze ifayile ye- ukhuphelo olutsha lweMac yakho. Esinye sezibonelelo zeMacOS Monterey yile Ukulula ukucima yonke into ngaphandle kwemfuneko yamanyathelo angqingqwa.
Ukusuka kwi-Mac yakho, yiya ku iwebhusayithi yonjiniyela kwi-Apple
Cofa kwiAkhawunti ekwikona ephezulu ngasekunene kwaye ungene ngemvume ukuba awukabikho
Cofa kwi icon yomgca emibini kwikona ephezulu ngasekhohlo, khetha Ukhuphelo kwaye uqinisekise ukuba i "Operating Systems" ithebhu ikhethwe phezulu
Cofa ku Faka iprofayile ecaleni kwenguqulelo ye-beta ye-macOS Monterey
Yiya kwifolda yakho yokukhuphela kwaye Kuya kufuneka ubone isixhobo sokungena ngemvume se-macOS
Cofa kuyo kabini Ukubeka umfanekiso wediski eluncedo, ngoku nqakraza kabini Fikelela Usetyenziso.pkg ukufaka iprofayili ye-beta ye-MacOS kwi-Mac yakho
Ukukhethwa kweNkqubo> Ifestile yoVavanyo lweSoftware kufuneka iqale ngokuzenzekelayo ngohlobo lwe-beta ye-macOS 12, cofa uHlaziyo ngoku ukukhuphela uhlaziyo (phantse i-12 GB ngobukhulu)
Xa ukhuphelo lugqityiwe, Uza kubona iwindow entsha ukufaka iMacOS Monterey, Cofa Qhubeka
Landela ukukhawuleza ukugqiba ukufakwa kwe-beta
Sele ulungile ukuvavanya nokunceda iApple iphucule le nguqulo.
Nceda ukhumbule ukuba yi-beta. Sukuzama xa ungazi ukuba uza kungena phi kuwo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » IMacOS Monterey » Uyifaka njani i-beta ye-MacOS Monterey
UApple ufuna ukususa ipassword kwi-macOS enkosi kwiiphasiwedi